Olee otú Zuru Hichapụ ihe iPhone
Olee otú Zuru Hichapụ iPhone 6S / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Amaghị otú na-ehichapụ ihe iPhone kpamkpam? Ụfọdụ ndị pụrụ atụ aro ka ị na-agbalị iji tọgharịa gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala. Otú ọ dị, site n'ime nke a, o yiri niile data na gị iPhone e ihichapu. Nke bụ eziokwu bụ na a ọkachamara mgbake ngwá ọrụ, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake), ị nwere ike ka na-ahụ onwe gị data na gị iPhone mgbe mmepụta ihe nrụpụta. Ya mere, bụ Enwere ụzọ kpamkpam ichicha ihe iPhone? Chọpụta, e nwere. Ị cantry Wondershare SafeEraser - a ngwá ọrụ na agha ọkọlọtọ ibibi data on iPhone. Mgbe eji ya, ọ dịghị data ga-natara, na ị na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Banyere Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser na-mepụtara aka ọrụ ihichapu onwe data on iOS ngwaọrụ, na-egbochi ọrụ 'onye ọmụma si na-leaked. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu na kasị atụ aro ngwa n'ihi na ndị niile na-mkpa ichicha iPhone data kpamkpam na permanently.Below bụ mfe nzọụkwụ maka otú iji ya kpamkpam ehichapụkwa gị iPhone.
Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otú ihichapu iPhone 6S (gbakwunyere) / 6 (gbakwunyere) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS kpamkpam, download na wụnye usoro ịhụ otú mfe ọ bụ iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Download nri version nke Wondershare SafeEraser maka kọmputa gị. Iche iche version maka Windows na Mac dị. Ẹkedori ya na jikọọ na kọmputa gị na gị iPhone site na eriri USB.
Cheta na: Biko cheta na data ehichapu site a usoro dịghị mgbe a ga gbakee.
Nzọụkwụ 2 Zuru ihichapu iphone
Ke akpan window, pịa 'ihichapu niile Data'. Na nri n'akụkụ, ụdị na 'ihichapụ' n'ịkwado nhichapụ. Ka usoro ihe omume kpamkpam ihichapu iPhone maka gị. N'oge procces, Akwụpụla gị iPhone na kọmputa gị.
Main atụmatụ maka Wondershare SafeEraser
Ihichapu Private Data: ihichapu safari cache, safari akụkọ ihe mere eme, safari kuki, keyboard cache, ozi, ozi Mgbakwụnye, na-akpọ ihe mere eme, ndetu, foto, wdg
Ihichapu ehichapụ faịlụ: ihichapu ozi, iMessage, kọntaktị, na-akpọ ihe mere eme, FaceTime, kalenda, ncheta, ndetu, safari ibe edokọbara, photos, videos na na.
Ihichapu All Data: ihichapu data niile, gụnyere ozi, na-akpọ ihe mere eme, FaceTime, kọntaktị, mail, kalenda, ncheta, ndetu, olu memos, safari ibe edokọbara, photos, videos, ngwa ọdịnala, usoro ntọala, keyboard cache, passbook, iTunes dB, iMessage , safari ọkacha mmasị, safari akụkọ ihe mere eme, ozi olu ozi olu, Apple ID, iCloud ID, egwuregwu center, Apple map, ihu igwe, ebuka, na ọdụ akwụkwọ akụkọ.
> Resource> iPhone> Olee otú iji Zuru Hichapụ iPhone